Bankiga Aduunka oo warbixin cusub ka soo saaray Arin aan Soomaalida Farxad galin… | Caasimada Online
Bankiga Aduunka oo warbixin cusub ka soo saaray Arin aan Soomaalida Farxad galin…
Oct 6, 2017 - Comments off
Warbixinta Bankiga Aduunka uu soo saaray ayaa waxa ay taabaneysaa heerka nolosha iyo saboolnimada baahday ee ka dhalatay deganaanshiya la’aanta, Abaaraha soo noq noqday iyo shaqo la’aanta ku habsatay dadka ku sugan gobolada Soomaaliya.
Gobolka ayaa sida warbixinta Bankiga Aduunka lagu sheegay wuxuu wajahayaa Abaaro daba dheeraaday oo daran, taasi oo keentay in dad ku dhow Shan boqol oo Kun oo dad ah ay ku jiraan xeryaha barakacayaasha iyo dhulka fogfog ee baadiyaha.
Bankiga Aduunka warbixintiisa waxaa sidoo kale lagu sheegay in ay sii xumaaneyso xaaladaha cunto, sababo la xiriira Roobabkii gu’ga oo la waayay intii u dhaxeysay October 2016-kii ilaa Sanadkan Bishii March.
Sida ku qeexan warbixintan ku dhowaad Lix Milyan oo dad ah ayaa ku sii jiri doona dhibaatadan, gaar ahaana kuwa ku dhaqan gobolada Baay iyo Bakool, iyo gobolada reer guuraaga ah ee Waqooyi Bari, iyada oo ay keeni doonto in la waayo dalaga, sidoo kalena ay sii dhintaan xoolo.
Macluumaad dheeri ah oo Worl Bankiga uu sameeyay ayaa waxa ay ku aruuriyeen gugii la soo dhaafay ee sanadkii 2016-kii qiyaastii dad ku dho dhow 4.9 Milyan oo ku dhaqan meelaha la tagi karo amni ahaan ee baadiyaha in uu ku habsaday faqri baahsan.
Ka sokow dadka baadiyaha ah waxaa warbixintan lagu sheegay in xeryaha dadka barakacayaasha ah ee ka jirto gaajo iyo saboolnimo lagu sheegay in 10-kii qof ee ku nool halkaasi Todobo ka mid ah ay yihiin faqiiriin.